Heshiiska Kepa oo Galabta la dhammeystirayo, Chelsea oo Jabineysa Rikoodhka ay dhawaan dhigtay Liverpool+SAWIR – Gool FM
“Waa inaad shaqo badan qabataa” – Mourinho oo dhaleeceeyay Maxamed Saalax
“Neymar Jr wuxuu ku guuleysan doonaa abaal-marinta Ballon d ‘Or” – Ander Herrera
Kevin De Bruyne oo hoggaaminaya xiddigaha caawinta ugu badan illaa iyo haatan ka sameeyey horyaalka Premier League
Riyad Mahrez oo hogaaminaya shaxda kooxdii ugu fiiceneyd Toddobaadkan Premier League-ga … “Xiddigee kaga jira kooxdaada?”
Wax walba aad uga baahan tahay inaad ka ogaato xaflada caawa ka dhici doonto magaalada Milan ee lagu bixinayo abaal-marinta xiddiga sanadka ee The Best
Heshiiska Kepa oo Galabta la dhammeystirayo, Chelsea oo Jabineysa Rikoodhka ay dhawaan dhigtay Liverpool+SAWIR
Byare August 8, 2018
(Europe) 08 Agoosto 2018. Goolhaye Kepa ayaa ka soo duulay Bilbao isagoona soo gaaray Magaalada Madrid si uu halkaa heshiisyo ula gaaro Chelsea dabadeedna wuxuu ku soo jeedaa London maanta oo Arboco ah.
Chelsea ayaa ogolaatay inay bixiso adduun dhan 80 milyan oo Euro taa oo ka dhigan inay Liverpool ka jabineyso Rikoodhka goolhayaha ugu qaalisan adduunka kaddib markii ay dhawaan uun 75 milyan oo euro ay Roma kaga soo qaateen Alisson Becker.
23-jirka ayaa waxaa safarkiisa ku wehliyay wakiiladiisa Margarita Garay iyo Gustavo Canizares.
Maanta oo arboco ah ayaa la dhammeynayaa heshiiska uu Kepa ugu soo biirayo Blues, si uu khamiista tababarka ula bilaabo.
Waxaa kaloo la sheegayaa xitaa inuu kulankiisii ugu horreeyay Chelsea u safan karo isla sabtida na soo aadan.
Waxay arrinkan ka dhigan tahay in Thibaut Courtois loo ogolaaday inuu ku biiro Real Madrid iyadoona heshiiska goolhayaha reer Belgium goor dhow lagu dhawaaqi doono.
Kooxda reer London ayaa la warinayaa inaysan ka labo labeyn dalabka kaga yimid macalinkooda Sarri ee ku aadan keenista Goolhayaha Bilbao, waxaan iminka lagu wadaa inuu u saxiixo heshiis aan ka yareyn shan sano wuxuuna qaadan doonaa mushaar ka badan kii uu ka heli jiray kooxda reer Spain.
Wada hadalada Milan iyo Chelsea oo meel fiican maraya
Waa sidee shaxda la filayo inuu ku shaqeyn doono tababare Julen Lopetegui xili ciyaareedka cusub?